Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 23/03/2018
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 23/03/2018
(နေပြည်တော်၊ ၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်)
Sittway March 23
AS part of the National Electrification Plan (NEP), 219 villages in Rakhine State will be connected to solar power electricity in the 2018-2019 financial year, said the Rakhine State Rural Development Department.
U Nay Htet Shein, Director of the Rakhine State Rural Development Department, said the NEP will be carried out in 16 townships and 219 villages in Rakhine State and will be outfitted with 11,333 units of solar electricity within the 2018-2019 financial year.
The NEP was started in 2016-2017 with support from the World Bank and funds from the Union Government and from the general public as well. The State will install units for public facilities such as street lamps, schools, libraries, medical centres, monasteries, religious buildings, and other public places.
—Kyaw Thu Htet, The Global New Light of Myanmar
Maungtaw March 23
According to the bilateral agreement between Myanmar and Bangladesh, Myanmar has made preparations for the repatriation process and is ready to accept the returnees.
Buthidaung March 23
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ ၂၁၉ ရွာ၌ ဆိုလာစနစ်ဖြင့် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်
စစ်တွေ မတ် ၂၂
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး ဌာနက အမျိုးသားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံကိန်း (NEP)အစီအစဉ်ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရှိ ကျေးရွာ ၂၁၉ ရွာတွင် ဆိုလာစနစ်ဖြင့် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ပေါက်တော၊ ရသေ့ တောင်၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ မောင်တော၊ ဘူးသီး တောင်၊ ကျောက်ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲ၊ မာန်အောင်၊ အမ်း၊ သံတွဲ၊ တောင်ကုတ်၊ ဂွ စသည့် မြို့နယ်များရှိ ကျေးရွာ ၂၁၉ ရွာတွင် ဆိုလာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၁၃၃၃ စု ဆိုလာမီးရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိ ရေးစီမံကိန်း (NEP)ဖြင့် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၅၄၉ ရွာမှ အိမ်ထောင်စု ၃၁၃၆၃ စု ဆိုလာမီးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ပြင် အများပြည်သူနှင့်ပတ်သက်သည့် နေရာများတွင်လည်း ဆိုလာမီး ၄ဝ၉၁ ယူနစ်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လည်း ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၆၈ ရွာမှ အိမ်ထောင်စု ၄၄၉၂ စုနှင့် အများသုံး ၁၆၆ ခုကို အိမ်သုံးဆိုလာစနစ် ဝပ် ၆ဝ နှင့် ဝပ် ၁ဝဝ များ မကြာခင်ကာလအတွင်း တပ်ဆင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လှဖိုးခေါင် ယာယီလက်ခံရေးစခန်း တည်ဆောက်မှု ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြီးစီး
မောင်တော မတ် ၂၂
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး အတွက် ယာယီလက်ခံရေး စခန်းများ တည်ဆောက်လျက်ရှိရာ မောင်တောမြို့နယ် လှဖိုးခေါင်ယာယီ လက်ခံရေးစခန်း တည်ဆောက်မှု သည် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သောကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်း လှဖိုးခေါင်ယာယီ လက်ခံရေးစခန်းတည်ဆောက်မှု တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ယာယီလက်ခံရေးစခန်းကို ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အဆောက်အအုံတည်ဆောက်မှု အရေအတွက် ၆၂၅ လုံး လျာထားချက်ဖြင့် တည်ဆောက်လျက်ရှိရာ မတ် ၃၁ ရက်တွင် တည်ဆောက်မှုပြီးစီးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှု အနေ အထားသည် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ရာ တည်ဆောက်မှု ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးပါက လူဦးရေ ၃ဝဝဝဝ ခန့်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံအကြား ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် လှဖိုးခေါင် ယာယီလက်ခံရေး ကြားစခန်း တည်ဆောက်နေမှုသည် မတ်လကုန်တွင် အားလုံးပြီးစီးတော့မည်ဖြစ်၍ ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အသင့်အနေအထားရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပုဏ္ဏားကျွန်း-ရသေ့တောင်-ဘူးသီးတောင် ဆက်သွယ်ထားသည့် စိုင်းဒင်တံတားအပါအဝင် တံတား ငါးစင်း မတ်လကုန်တွင် ဖွင့်မည်
ဘူးသီးတောင် မတ် ၂၁
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသ ပုဏ္ဏားကျွန်း-ရသေ့တောင်-ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တို့ကို ဆက်သွယ်ထားသည့် စိုင်းဒင်ချောင်းပေါ်၌ တည်ဆောက်ထားသည့် စိုင်းဒင်တံတား၊ ရွာဟောင်း ချောင်းပေါ်၌ တည်ဆောက်ထားသည့် ရွာဟောင်းတံတား၊ ငစံပေါ်တံတားနှင့် သောင်းဒရားချောင်း ပေါ်၌ တည်ဆောက်ထားသည့် သောင်းဒရားတံတားနှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်၌ ရသေ့တောင် တံတား တို့ကို မတ် ၃၁ ရက်တွင် တစ်ပြိုင်တည်း ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တံတားငါးစင်း ဖွင့်လှစ်ပြီးသည်နှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်း-ရသေ့တောင်-ဘူးသီးတောင်အထိ ကားလမ်း တစ်ဆက်တည်း သွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်-စစ်တွေကား လမ်းမကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်က အဆိုပါလမ်းသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ရေလမ်းကိုသာ အဓိကထား သွားလာနေရကြောင်း၊ ယခုအခါတွင် တံတားငါးစင်း ဖွင့်လှစ်ပြီးသည်နှင့် ရေလမ်းကြောင်းနှင့် ကုန်းလမ်းကြောင်း နှစ်ခုစလုံးကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဒေသခံများ သွားလာရေးနှင့် ကုန်စည် စီးဆင်းမှုလုပ်ငန်းများ လွယ်ကူမြန်ဆန်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မောင်တောဒေသအတွင်းရှိ မြို့ရွာများ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေချောမွေ့ စေရန်နှင့် ပြည်သူများ ခရီးသွားလာမှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လွယ်ကူလျင်မြန်စေရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လမ်းတံတားများ တည်ဆောက် လျက်ရှိရာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်း တည်ဆောက် လျက်ရှိသော ပေ ၅ဝ နှင့်အထက် တံတားငါးစင်းအား မတ်လကုန်တွင် တစ်ပြိုင်တည်း ဖွင့်လှစ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။